Iibso budada Lorcaserin HCL (1431697-94-7) hplc≥98% - Wisdompowder
Budada Lorcaserin HCL waa habka hydrochloride ee lorcaserin. Magaca sumadda Lorcaserin waa “belviq”, waa dawo afka laga qaato oo dhiirrigelisa miisaanka oo yaraada. Waxaa loo isticmaalaa cunnada iyo jimicsiga dadka waaweyn ee miisaankoodu culus yahay ee qaba dhibaato caafimaad la xariirta culeys ama dadka waaweyn oo cayil badan si ay u dhisaan culeyska una joojiyaan.
Lorcaserin HCL budada (1431697-94-7) fiidiyaha
Lorcaserin HCL (1431697-94-7) Macluumaadka Saldhigga
Magaca kiimikada 8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo [d] azepine hydrochloride
Isku mid ahaanshaha Lorcaserin
Formula kelli C11H15Cl2N
Miisaanka kelli 232.15 g / mol
Muhiimadda InChI ITIHHRMYZPNGRC-UHFFFAOYSA-N
milmi Yaraanta biyaha ayaa ka weyn 400 mg / mL
Codsiga Lorcaserin waxaa loo istcimaalaa jimicsi uu dhakhtarku oggolaaday, dabeecadda oo la beddelo, iyo barnaamijka cuntada kaloriinta ee la dhimay si ay kaaga caawiso inaad miisaan lumiso.
Lorcaserin HCL budada General Description
Budada Lorcaserin HCL waxay saameysaa calaamadaha kiimikada maskaxda ee xakameeya rabitaanka cuntada. Budada Lorcaserin HCL waxaa lala isticmaalaa cuntada iyo jimicsiga ilaa dawee buurnaanta.
Lorcaserin ayaa mararka qaarkood loo isticmaalaa in lagu daaweeyo buurnaanta taas oo laga yaabo inay la xiriirto sonkorowga, kolestaroolka sare, ama dhiig karka.
Budada Lorcaserin HCL (1431697-94-7) Taariikh
Lorcaserin HCL waa daawo miisaan lumis ah oo ay soo saartay Arena Pharmaceuticals.
Lorcaserin HCL budada Mechanism Of Action
Budada Lorcaserin HCL waxay shaqeysaa iyadoo kaa caawineysa inaad dareento inaad buuxsamayso cunnooyinka yaryar.
Lorcaserin waa xulasho 5-HT2C receptor agonist, iyo tijaabada vitro ee daroogada waxay muujisay xulasho macquul ah 5-HT2C bartilmaameedyada kale ee la xiriira.5-HT2 receiptors waxay ku yaalliin maskaxda gaar ahaan, waxaana laga heli karaa choroid plexus, cortex, hippocampus, cerebellum, amygdala, thalamus, iyo hypothalamus. Kicinta 5-HT2C-ka-qaatayaasha ku jira hypothalamus-ka ayaa loo maleynayaa inay dhaqaajiso wax soo saarka proopiomelanocortin (POMC) oo markaa ay kor u qaaddo miisaanka oo hoos u dhaca iyadoo loo marayo satiety. In kasta oo guud ahaan loo maleynayo in 5-HT2C qaatayaasha ay gacan ka geystaan ​​habeynta rabitaanka cuntada iyo sidoo kale niyadda, iyo dheecaanka endocrine, habka saxda ah ee qaanuunka rabitaanka cunnada weli lama aqoon. Lorcaserin wuxuu muujiyey xulasho 100x ah oo loogu talagalay 5-HT2C iyo kan ku dhow dhow 5-HT2B receptor, iyo 17x xulashada ka badan 5-HT2A receptor.
Lorcaserin HCL budada (1431697-94-7) Codsiga
Budada Lorcaserin HCL waxaa loo adeegsadaa jimicsi uu dhakhtarku oggolaaday, isbeddelka dabeecadda, iyo barnaamijka cuntada kalooriga oo yaraaday si uu kaaga caawiyo inaad lumiso miisaanka. Waxaa adeegsada dadka cayilka qaarkood, sida kuwa cayilan ama leh dhibaatooyin caafimaad oo la xiriira miisaanka. Miisaanka oo yaraada iyo in aad iska ilaaliso ayaa yarayn kara khataraha caafimaad ee badan ee la yimaada buurnaanta, oo ay ku jiraan cudurrada wadnaha, sonkorowga, dhiig -karka, iyo nolosha oo gaaban. Budada Lorcaserin HCL waxay ka tirsan tahay nooc dawooyin ah oo loo yaqaan agonists receptor serotonin. Waxaa loo malaynayaa inay shaqaynayso iyadoo saamaynaysa qayb ka mid ah maskaxda oo gacan ka geysanaysa xakamaynta rabitaanka cuntada.
Budada Lorcaserin HCL budo dheeraad ah
Lorcaserin ma daaweyn doonto xaalad caafimaad oo kasta oo salka ku haysa (sida cudurka wadnaha, kaadi macaanka, dhiig karka).
Budada Lorcaserin HCL (1431697-94-7) Tixraac
 Cunto Maandooriye Cusub Lorcaserin Ayaa Ku Guulaystay Cod Ka Yimid Gudiga FDA ". webmd. 10 Meey 2012. Waxaa laga keydiyay asalka 12 May 2012.
 ”FDA Waxay Soo Saaraysaa Warqad Jawaabeed Dhamaystiran oo Loogu Tala Galay Codsiga Dawada Cusub ee Lorcaserin”. 23 Oktoobar 2010. Waxaa laga keydiyay asalka 24-kii Oktoobar 2010.
 ”BELVIQ iyo BELVIQ XR HCP Bogga Hoyga”. www.belviqhcp.com. Laga keydiyay asalka markay ahayd 2016-06-16.
 Bray, GA; Frühbeck, G; Ryan, DH; Wilding, JP (7 Maajo 2016). "Maareynta buurnaanta". Lancet. 387 (10031): 1947-56. doi: 10.1016 / S0140-6736 (16) 00271-3. PMID 26868660.
Hagaha kama dambaysta ah ee Alfa Lipoic Acid (ALA) sannadka 2020
Gamma-aminobutyric acid (GABA) Budada 56-12-2